Kismaayo News » Kismaayo way dhaqaaqday ee siyaado Alle
Kismaayo way dhaqaaqday ee siyaado Alle
Kn: Garoonka ciyaaraha Waamo ee magaalada Kismaayo ayaa markii ugu horaysay caawa oo Jimce ah lagu ciyaaray mid ka mid ah tartanka xulalka magaalada ee heerka koobaad oo ka socda Kismaayo.
Arinta xiisaha leh ee u baahan in la bogaadiyo ma aha oo kaliya garoonka sida casriga ah loo dhisay ee waa sidoo kale amaanka magaalada oo suuro galiyay in xili habeen ah magaalada lagu qabto tartanka ciyaaraha oo ay ka soo qayb galaan dadweyne tiro badan oo ka kala yimid daafaha magaalada ayagoon naftooda cidna uga baqayn inay dilaan ama dhacaan.
Waa Alle mahaddii in magaalada Kismaayo ay noqoto magaalada ugu amaanka fiican magaalooyinka dhaca Koonfurta Soomaaliya. Maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale uu fanaanka ku caanbaxay dhaantada, Cali Dhaanto uu amin habeen ah bandhig faneed ku qabtay hoolka balaaran ee Waamo Garden kaasi ooy isugu tageen wax ka badan kun ruux oo dhalinyaro u badan, wuxuuna socday bandhig faneedku ilaa iyo saq dhexe taasi oo ku tusinaysa amaanka magaaladu heerka uu gaarsiisanyahay.
Waxaan soo xusuustay hal-hayska Soomaaliyeed ee ahaa “nabad baa naas la nuugo leh”, sidaasi darted, Reer Kismaayo waxaa la gudboon inay nimcadaasi Eebe xajistaan oo meel uga wada jeestaan cid kasta oo carqalad ku ah nabadda ay maanta ku naaloolanayaan.
F.G: Xuquuqda Sawirka waxaa leh Cabdiqaadir Gaboobe